Spain setịpụrụ akụkọ ihe mere eme nke ọkara narị afọ maka ọnụọgụ ndị njem na 2020
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Spain setịpụrụ akụkọ ihe mere eme nke ọkara narị afọ maka ọnụọgụ ndị njem na 2020
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị njem njem mba ofesi na Spain dara na 2020 n'ihi ọrịa zuru ụwa ọnụ COVID-19 na mmachi njem gọọmentị nke gọọmentị ụwa tiri
2020 ghọrọ afọ jọgburu onwe ya maka njem nlegharị anya nke Spain na ọkara nke narị afọ
Mmefu ndị njem na Spain rutere karịa pasent iri asaa na ise
Ọrịa na-efe efe nke COVID-19 bibiri ụlọ ọrụ ndị na-eme njem nlegharị anya na Spain
N'ihi na Covid-19 ọrịa na-efe efe, njem nleta na-aga Spain na afọ gara aga jiri 77.3% belata ma e jiri ya tụnyere 2019, dịka data sitere na National Institute of Statistics (INE).
Nde mmadụ 18.9 gara Spain na 2020.
Nke a bụ ọnụ ọgụgụ kacha ala na afọ iri ise gara aga. Spain nabatara ndị njem nleta 50 nde na 20.
Ọtụtụ n'ime ndị njem bịara Spain bụ ndị si France - nde mmadụ 3.9. Ebe nke abụọ bụ nke ndị Britain were - ndị njem nleta nde 3.2, na ndị nke atọ ndị Germany weghaara - nke nde mmadụ 2.4.
Ndị Canaries, Catalonia na Valencia bụ ndị Spain kachasị ewu ewu na ndị njem nleta.
Ihe mmefu njem mba ọzọ nke afọ 2020 na Spain ruru ijeri euro 19.7, ebe n'afọ gara aga, ndị ọbịa mba ọzọ nọrọ ijeri 91.9 na mba ahụ.